'ह्यामलेट' सेक्सपियरको चार सय वर्षभन्दा पुरानो चर्चित नाटक हो । नाटकको सुरूमै डेनमार्कका राजकुमार ह्यामलेट आफ्ना बुवाको मृत्यु शोकमा हुन्छन् । त्यसपछि उनका काका क्लाउडियसले आमा गेर्ट्रुडसँग विवाह गर्छन् र सत्ता पनि हत्याउँछन् ।
यो घटनापछि राजकुमार ह्यामलेटको सपनामा बुबाको भूत आउन थाल्छ र क्लाउडियस आफ्नो हत्यारा भएको बताउँछ । त्यो सपनामा आउने भूतले यो पनि भन्छ- छोरा तिमीले आफ्नो काका क्लाउडियसँग बदला लिनुपर्छ । जसरी पनि बदला लिनुपर्छ ।
तर सपनामा बुवाको भूतले भनेका कुरा सत्य हुन् वा भ्रम भनेर ह्यामलेटले ठम्याउन सक्दैन । बिस्तारै उसको मानसिक स्थिति खलबलिन्छ ।
प्रतिशोध र नियतिको कथा भन्ने ह्यामलेट संसारभरका पाठक र दर्शकसम्म पुग्न सफल नाटक हो । यस्तो नाटक हो जुन आजको समयमा पनि रंगमञ्च र सिनेमामा दोहोरिइरहेको छ । हरेक पुस्ताका निर्देशक, लेखक, कलाकार, दर्शकलाई आकर्षित पार्न सफल ह्याम्लेटले बलिउडलाई पनि प्रभावित पार्ने नै भयो ।
सेक्सपियरबाट प्रभावित भई सिनेमा बनाउने बलिउड निर्देशकको सूचीमा विशाल भारद्वाजको नाम सबभन्दा अगाडि आउँछ । उनले सेक्सपियरको 'म्याकवेथ', 'ओथेलो' र 'ह्यामलेट' बाट प्रभावित भई क्रमश: 'मकबुल', 'ओमकारा' र 'हैदर' बनाएका छन् । र यी तीनै फिल्मबाट उनले प्रशस्तै प्रशंसा पनि पाएका छन् ।
'मकबुल', 'ओमकारा' र 'हैदर' निर्देशक भारद्वाजको सिक्वल फिल्म हो। तीनमध्ये हैदर व्यावसायिक सफलता र समीक्षकको प्रशंसा दुवै हिसाबले अब्बल मानिन्छ। निर्देशक, कलाकार, फिल्मले उठाउने मुद्दा, संवाद, संगीत, फिल्म छायांकनका लागि रोजिएको ठाउँलगायतका कारण हैदर हेर्नैपर्ने फिल्म हो ।
हैदरको कथाको जग सेक्सपियरको ह्यामलेट भए पनि समय, सन्दर्भ र प्रस्तुति हिसाबले निर्देशक भारद्वाजले यसलाई आफ्नै अन्दाजमा ढालेका छन् । यसको कहानी काश्मिरको परिवेशमा भनिएको छ । आतंकवादी समूह र सेनाको बन्दुकको त्रासको वातावरणबीच हुर्कने हैदर पात्रको परिवारको कथा छ।
बुवाको खोज र काकासँग बदला लिने यात्रामा हिँडेका हैदरकहाँ पुग्लान् ? के गर्लान् ?
यति धेरै विशेषता बोकेको हैदर हेर्न बाँकी भए आज-अहिल्यै किन नहेर्ने ?